နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - Page 1873 of 1913 - News @ M-Media
တမန်တော်ကို စော်ကားတဲ့ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး ရုပ်ရှင်-ဘာကြောင့်? ဘယ်လို? (၁)
စက်တင်ဘာ၊ ၁၇ ၊ ၂၀၁၂ M-Media Source : http://www.onislam.net/ မူရင်းတင်ပြသူ –Wael Hamza လျှပ်တပြက် နောက်ခံအကြောင်း ယခုအထိ ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးနေသော သတင်းများအား ခြေရာမခံမိသော သူတို့ အတွက်[Read More…]
September 24, 2012 — ဆောင်းပါး, နိုင်ငံတကာသတင်း
စက်တင်ဘာ၊ ၂၀ ၊ ၂၀၁၂ M-Media Source: OnIslam နယူးယောက်။ ။ ကုလသမ္မဂ္ဂအထွေအထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှရိုက်ကူးသော တမန်တော်မုဟမ္မဒ် (ဆွ) ကို အသရေဖျက်ထားသည့် ရုပ်ရှင်အား ရှုပ်ချလိုက်ပြီး ထိုကဲ့သို့ စော်ကားမှုသည်[Read More…]
September 20, 2012 — နိုင်ငံတကာသတင်း
ဘာသာတရားများကို အသေရေဖျက်မှုအပေါ် ဥပဒေထုတ်ပြန်ရန် ကုလသမဂ္ဂအား အင်ဒို သမ္မတ တိုက်တွန်း
စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၊ ၂၀၁၂ M-Media ဂျကာတာ(ဆင်ဟွာ)။ ။ အင်ဒိုသမ္မတယူဒိုယိုနို (Susilo Bambang Yudhoyono)က ကုလသမဂ္ဂနှင့် OIC တို့အား တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကို အသေရေဖျက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အတွက်ဘာသာရေး အသေရေဖျက်မှုကို စည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်ဖို့ အလေးအနက်[Read More…]
September 19, 2012 — နိုင်ငံတကာသတင်း
ဓာတ်အားလိုင်း ဖျက်ဆီးခံရကြောင်း အီရန်ပြောကြား
စက်တင်ဘာ၊ ၁၇၊ ၂၀၁၂ M-Media Source:http://www.dw.de လွန်ခဲ့တဲ့လက ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အီရန်နျူကလီးယားစက်ရုံကိုပေးပို့တဲ့ ဓာတ်အားလိုင်းပျက်တောက်သွားတယ်လို့ အီရန်အနုမြူအေဂျင်စီအကြီးအကဲ အဗ္ဗာစီ (Fereydoun Abbasi)က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုမြူအေဂျင်စီမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ဖျက်ဆီးခံရတာကို တီဟီရန်အနေနဲ သံသယ၀င်မိတယ်လို့ တနင်္လာနေ့မှာ သူကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။[Read More…]
Previous 1 … 1,871 1,872 1,873 1,874 1,875 … 1,913 Next